प्रचण्डलाई भेट्न उत्तर कोरियाली राजदूत पेरिसडाँडामा, के के विषयमा भए कुराकानी ? - Dainik Nepal
प्रचण्डलाई भेट्न उत्तर कोरियाली राजदूत पेरिसडाँडामा, के के विषयमा भए कुराकानी ?
दैनिक नेपाल २०७४ माघ ७ गते १६:२९
काठमाडौँ, ७ माघ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत किम योङ हाकबीच भेटवार्ता भएको छ । राजदूत किम र प्रचण्डबीच आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भेटवार्ता भएको हो ।
भेटवार्ताको क्रममा राजदूत किमले नेपालमा बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकोमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिएका छन् । उनले सेप्टेम्बरमा हुने कोरियन कम्युनिष्ट पार्टीको ७० औँ पार्टी स्थापना दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई निमन्त्रणा समेत गरे ।
जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि एमाले–माओवादी बीच एकता हुन लागेको बताए । कोरियन कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा पार्टीको तर्फबाट उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल उपस्थित हुने बताएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनहरी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।